★မြန်မာ့အလင်း★: Malaysia court upholds Muslim's return to Buddhism
နအဖ မှားတာတွေ ရှိတာ မှန်ပါတယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ကြီးလေးတဲ့ ထောင်ဒဏ်ခတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးကို စစ်တပ်ကပဲ မောင်ပိုင်စီးလုပ်ခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ ထိပ်ပိုင်းအားလုံး စစ်သားတွေပဲ ယူထားတာ၊ ပြည်တွင်းစစ်ကို သက်ဆိုးရှည်အောင် လုပ်ထားတာတို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးမှာ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်လို့ရပါတယ်။ အခွင့်အရေး မနိမ့်ပါဘူး။ အဲဒါတော့ ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက် ရဲရဲကြီး တာဝန်ခံပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ နအဖလူလို့ စွပ်စွဲချင်သလား? ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစား။ တံဆိပ်တပ်ပြီး စွပ်စွဲတာတွေ ခေတ်ကုန်ပါပြီ။
ကုလားတွေကတော့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မရှိဘူးဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ မျောက်တူ ဆိတ်တူ ပလီဆရာကြီးတွေက နှိပ်စက်ခံရလို့ ဆိုပြီး မျက်ရည်ကျပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အခွင့်အရေးမပေးတဲ့ ပလီကနေ ခွေးအူသံကြီးထုတ်လွှင့်ခွင့်ရတယ် မဟုတ်ပါလား? ကျနော်တို့ ဆီမှာ ဘာသာတစ်ခုကနေ တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ ဘာများအခက်အခဲ ရှိပါသလဲ? ဗုဒ္ဒဘာသာကို စွန့်ဖို့ တရားရုံးကို တက်ပြီးအရေးဆိုဖို့ လိုသေးလား? ဘယ်သူ့ကို ကြောက်ဖို့ လိုပါသလဲ? ကျုပ်တို့ဆီမှာ ဘာသာရေးဟာ အင်မတန်ကို လွတ်လပ်တဲ့အပြင် ပိုတောင် ပိုပါသေးတယ်။ ဆိတ်တူ မျောက်တူ ပလီဆရာတွေဆိုရင် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနက လစာပေးထားပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မိုဒိမ်းကောင်တပည့်တွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂုတ်သွေးကို စုတ်နေတာပါ။ အဲလောက် အခွင့်ထူးတွေ ခံစားနေရတာတောင် မွတ်ဆလင်တွေက မကျေနပ်သေးဘူးဆိုပဲ။
သူတို့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံထဲမှာ အင်မတန်ကို ဒီမိုကရေစီကျပါတယ်လို့ ချီးကျူးခံရတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံကို ကြည့်ပါ။ သူတို့ဆီမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ဘာမှ အခက်အခဲမရှိတဲ့အပြင် ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ပလီဆရာတွေကိုလည်း ဆုငွေချီးမြှင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင် ဘာသာကနေ တခြားဘာသာကို ပြောင်းမယ်ဆိုရင် လုံးဝ ခွင့်မပြုပါဘူး။ တကယ်လို့ နဂိုက တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အခုနောက်ပိုင်းမှ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို စွန့်လွှတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ မလေးရှား မတရားရုံးကနေ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါကလဲ လွယ်လွယ်ကူကူ စွန့်လို့မရပါဘူး။ တရားရုံးပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ စွန့်လို့ရပါတယ်။ ဒါလည်း အောင်မြင်ဖို့က မသေခြာပါဘူး။ ကုလားတွေ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဟာ ဘာကြောင့် အဲလောက်အထိ မမျှ မတလုပ်နေတာလဲ?
ကဲ.. ကဲ.. သတင်လေးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟောင်းတစ်ယောက်ဟာ မွတ်ဆလင်ကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်ပြောင်းဖို့ ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ယူရလဲ သိအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
KUALA LUMPUR, Malaysia: A Malaysian court ruled Monday thataconvert to Islam has the right to return to her original religion, Buddhism, upholding an earlier decision favoring religious minorities in this Muslim-majority country.
Malaysia hasadual court system for civil matters — Shariah courts for Muslims and secular courts for non-Muslims, which make up more thanathird of the country's 27 million people. In interfaith disputes, the jurisdiction of the courts has often clashed, and Shariah courts usually have the last word.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:52 AM